Huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 kuBulawayo hunenge huri kuramba huchiwedzera zvakanyanya mumazuva mashoma apfuura kunyangwe muHarare mune vanhu vakawandisa vabatwa nacho zvinhu zvinenge zviri kuramba zvichiita nani.
Nemusi weSvondo bazi rezvehutano rakazivisa kuti pavanhu makumi matatu nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi, makumi maviri vari kuBulawayo, vana kuHarare, mumwe chete kuMashonaland East uye vaviri kuMidlands.
Vanhu vose ava havana nhoroondo yekubuda munyika. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika vave zviuru zvisere nezana nemakumi mana nemanomwe kana kuti 8, 147. Munyika mune vanhu mazana maviri nemakumi matatu nevasere kana kuti 237 vari kurwara neCovid-19 parizvino.
Pavanhu vari kurwara ava, muBulawayo ndimo mune vanhu vakawandisa vanosvika zana negumi nevatanhatu kana kuti 116.
Harare inova ine vanhu vakawandisa vakabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga musi wa 20 Kurume, ine vanhu makumi maviri nevanomwe chete vari kurwara parizvino. Vanhu vapora kusvika parizvino zviuru zvinomwe nemazana matanhatu ane makumi manomwe nevasere kana kuti 7, 678.
Izvi zvinotevera kupora kwevamawe vanhu vashanu nezuro. Hakuna munhu akafa nezuro zvichireva kuti vanhu vafa vachiri mazana maviri nemakumi matatu nemumwe kana kuti 231.
Harare ndiyo ine vanhu vakawandisa vakafa vanosvika zana nemakumi maviri nemumwe ichiteverwa neBulawayo ine vanhu makumi mana nevanomwe vakashaya. Masvingo ndiro dunhu rine vanhu vashoma vakashaya vanova vaviri chete.